Ngalesi sikhathi, ngithemba ukuthi ujabule ngamathuba okwenza izivivinyo zakho zedijithali. Uma usebenza kwinkampani enkulu ye-tech, kungenzeka usuvele wenza lezi zivivinyo ngaso sonke isikhathi. Kodwa uma ungasebenzi enkampanini ye-tech, ungase ucabange ukuthi awukwazi ukuqhuba ukuhlolwa kwe-digital. Ngenhlanhla, lokho kuyiphutha: ngokuklama okuncane nokusebenza kanzima, wonke umuntu angaqhuba ukuhlolwa kwedijithali.
Njengesinyathelo sokuqala, kuyasiza ukuhlukanisa phakathi kwezinyathelo ezimbili eziyinhloko: ukwenza ngokwakho noma ukusebenzisana nabanamandla. Futhi kunezindlela ezimbalwa ezahlukene ongazenza ngazo wena: ungazama ezindaweni ezikhona, ukwakha ukuhlolwa kwakho, noma ukwakha umkhiqizo wakho wokuhlola okuphindaphindiwe. Njengoba uzobona ezibonelweni ezingezansi, akekho kulezi zindlela ezihamba phambili kuzo zonke izimo, futhi kungcono ukucabanga ngabo ngokunikeza ukuhwebelana ngokuhamba ngobubanzi obuningi: izindleko, ukulawula, ubuqiniso, nokuziphatha (isibalo 4.12).
Umdwebo 4.12: Ukufingqiwe kokuhweba ngezindlela ezahlukene ongazenza ukuthi ukuhlolwa kwakho kwenzeke. Ngendleko ngisho izindleko kumcwaningi ngokuqondene nesikhathi nemali. Ngokulawula ngisho ikhono lokwenza lokho okufunayo ngokwemigomo yabathintekayo abaqashiwe, ukungahleliwe, ukuletha ukwelashwa, kanye nemiphumela yokulinganisa. Ngokweqiniso Ngisho ukuthi izinga lezinqumo lilingana nobani obhekene nakho ekuphileni kwansuku zonke; phawula ukuthi ubuqiniso obuningi abubalulekile njalo ekuhloleni izinkomba (Falk and Heckman 2009) . Ngu izimiso zokuhle ngiqonde ikhono abacwaningi abanezinhloso ezinhle ukuphatha zezinselele zezindinganiso ezingase zivele.